Dameerada oo ay dhibaato caalimi soo foodsartay – Balcad.com Teyteyleey
Xayaawanka Dameerka oo ay dadka aduunka si weeyn u adeegsadan ayaa maanta waxa soo wajahaday dhibaato caalami ah. Dameerka waa noole ay dadka ay u adeegsadan dhaaminta biayha, beerafalida, daabulka alaabta iyo dadka. bales hadeer waxaa timid dhibaato xoogan
toban sankahor xayawaanka dameerada waxaa soo foodsartay in hilbikooda la cuno loona dhoofin jirey dalala aduunka ka mid sida Chine. waxaana arinka ka hortagay dad u istaagay xquuqda xayawaanka dameerka ah.
xalada ugu adaga waxaa ay soo foodsartay xaqyawanka dameerada waqtiga oo maqaarkiis si weeyn looga ganacsado. sanadkasta waxaa dunida loo dhoofiyaa 2o miliyan oo maqaarka dameerka. inta ugu badan waxaa loo dhoofiyaa dalka china oo u isticmaalo siyaabo kaladuwa.
farsadamad dhanaak dawada, sameeynta kobaha iyo dharka iyo xitaa mararka in la cuno hilibka oo noqotay ganacasi si weeyn u kordhaye sanadan dambe. arinka ayaa dhib weeyn ku noqon doono Qarada afrika oo meeshasida ugu weeyn looga isticmalo xayawaanka dameerka
dalal badan afrika waxaa malinkastaa laxadaa boqolaad darmeer oo ay leeyahiid dad beeralaye iyo kuw gadiidka oo kale u isticmalo. dalal badan afrika ayaa arinka ka muujinaya walac. somaliya inkasta oo aan laga dhoofin hadana waxaa macquul in ganacsatada ay bilaban hadii ay helaan suuq fiican oo ka iibsada
The post Dameerada oo ay dhibaato caalimi soo foodsartay appeared first on Ilwareed Online.
Shirkii dib u eegista Dastuurka oo dib loo dhigay (Waa maxay sababta?)